Soo dejisan Discord 0.0.305 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Discord
Discord – software-ka loogu talagalay xiriirka codka iyo qoraalka ayaa diirada saaraya bulshada ciyaaraha. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid server-kaaga ama waxaad ku xiran kartaa kuwa hadda jira oo leh jihooyinka kuxiga iyo joornaalada. Discord waxay taageertaa qaybaha qoraalka iyo codka ah halkaas oo aad kula xiriiri kartid, faylashaada ama GIF-animations oo aad u aragto qaababka xubnaha kale ee kanaalka. Nidaamku wuxuu taageerayaa qalabixinta adeegyo dhinac saddexaad ah wuxuuna awood u leeyahay inuu ku xiro akoonnada isticmaalaha dheeraadka ah ee Facebook, YouTube, Skype, Steam, Twitch, iwm. Discord wuxuu ka kooban yahay Muuqaalka Muuqda ee soo bandhigaya astaanta isticmaalka hadalka ee meesha aad ku hagaajin karto mugga mid kasta oo ka mid ah ka qaybgalayaasha doodda iyada oo aan la dhicin ciyaarta. Discord wuxuu leeyahay qalabka loogu talagalay qaababka sare ee ogeysiisyada isgaarsiinta codka iyo fiidiyowga, iyo sidoo kale siyaabo dheeraad ah oo loogu talagalay hagaajinta hababka kala duwan inta lagu jiro streaming.
Isgaadhsiinta codka ee tayo sare leh leh goobo horumarineed
Nabadgalyada iyo ilaalinta DDoS
Taageerada baaxada leh
Isku xirka xisaabaadka ciyaaraha ee dheeraadka ah
Nidaamka habka sahlan
Wax saameyn ah kuma yeelan kartid wax soo saarka
Soo dejisan Discord
Faallo ku saabsan Discord
Discord Xirfadaha la xiriira